ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ဟု KNU ပြော | ဧရာဝတီ
ဇာနည်မာန်| January 7, 2013 | Hits:2,243
1 | | ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းက KNU ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးနှင့် အဖွဲ့ကို တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
လက်ရှိအစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးပြောဆိုနေသော ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စရပ်များတွင် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) က ပြောဆိုလိုက်သည်။
“ကျနော်တို့ ကရင်လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် ကြာခဲ့ပြီ။ ကျနော်တို့ ကရင်ပြည်သူတွေလည်း ထိခိုက်သေကြေတာတွေ များလွန်းနေပြီ။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး အနာဂတ်မှာ မဖြစ်စေချင်တော့တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လုပ်နေတာတွေကို နောက်ကြောင်းပြန် လှည့်မှာမဟုတ်ဘူး” ဟု ရန်ကုန်သို့ ရောက်နေသော KNU ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်က ပြောသည်။
KNU အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ပဒိုကွယ်ထူးဝင်းကလည်း လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနေမှုများကို မပျက်ပြားစေလိုကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ အနေနဲ့ကတော့ ဒီနေ့လုပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ မပျက်ပြားစေချင်ဘူး။ ကျနော်တို့ ရွေးလိုက်တဲ့ ဒီလမ်းကို ကျေနပ်မှုရှိတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေ နစ်နာလွန်းလှပါပြီ။ နာကျင်မှု အနည်းဆုံးနည်းနဲ့ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို ဖြစ်မြောက်အောင်ပဲ ကြိုးစား လုပ်ချင်ပါတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ထို့အတူ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပြောဆိုရာတွင် တဦးနှင့်တဦး ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရန်နှင့် တဘက်နှင့် တဘက် သံသယများရှိနေသည်ကို ပြေလျော့စေရန်လည်း အရေးကြီးကြောင်း ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်က ဆိုသည်။
“နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်တောင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ ၂ ခုအနေနဲ့ သံသယတွေကတော့ ပျောက်ဦးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ယုံကြည်မှုကလည်း အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ ရှိနေအုံးမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုပဲ တဘက်နဲ့တဘက် ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်သွားဖို့၊ သံသယတွေ ဖြေလျှော့သွားဖို့ ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ ကြိုးစားပြီး လုပ်သွားမှာပါပဲ” ဟု သူက ပြောသည်။
ဗဟိုကော်မတီဝင် ပဒိုစောလှထွန်းကလည်း အကယ်၍ နှစ်ဘက်ယုံကြည်မှုကို မတည်ဆောက်နိုင်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေမှုများ ပျက်ပြားသွားမည် ဆိုပါက KNU အနေဖြင့် မူလလမ်းကြောင်းဖြစ်သည့် လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်ကိုသာ ပြန်ရောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
“ဒီလို အခြေအနေ ရောက်သွားခဲ့ရင် ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေပဲ အထိနာမယ်။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နောက်ပြန် မလှည့်တမ်း အဆုံးစွန်အထိ သွားမယ်လို့ ကျနော်တို့ ပြောတာဖြစ်တယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
စစ်အစိုးရကို တော်လှန်သော သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တခုဖြစ်သည့် KNU အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးနည်းလမ်း တကျ ဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း ပါတီတခုအဖြစ် တည်ထောင် လှုပ်ရှား သွားလိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
“နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ စားပွဲဝိုင်းမှာ ထိုင်ဆွေးနွေးတယ် ဆိုပေမယ့် KNU ပါတီ မထောင်ဘူး။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ မပြင်သေးသရွေ့၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် KNU က ပါတီထောင်ပြီး နိုင်ငံရေး လုပ်သွားမှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု ပဒိုကွယ်ထူးဝင်းက ပြောသည်။
KNU အဖွဲ့အတွင်း ဦးဆောင်သူများ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီး မကြာမီတွင်ပင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က KNU မှ တာဝန်ရှိသူများကို နေပြည်တော်သို့ လာရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့် ဥက္ကဋ္ဌသစ် မူတူးစေးဖိုး၊ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ပဒိုကွယ်ထူးဝင်း၊ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်တို့ပါဝင်သည့် အဖွဲ့မှာ နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့သို့ ရောက်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းအဖွဲ့အနေနှင့် ယခုတကြိမ်လာရောက်ခြင်းသည် ပြောင်းလဲသွားသော ခေါင်းဆောင်များနှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရကို မိတ်ဆက်သည့် သဘောသာဖြစ်ပြီး နှစ်ဘက် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများ သီးသန့် ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာတွင် ယနေ့ပြုလုပ်သည့် KNU နှင့် ပြည်တွင်းရှိ ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံချိန်တွင် KNU တာဝန်ရှိသူများက ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင်တို့နှင့် တွေ့ဆုံချိန်တွင် လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်ပွားနေသော စစ်မက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
“ကချင်ကိစ္စ၊ ကချင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကလည်း ကျနော်တို့ ကရင်နဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။ ကချင်နဲ့ စစ်ဖြစ်နေတုန်းမှာ ကရင်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပြောနေတယ်၊ ချင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြောနေတယ်။ တကယ်လို့သာ တပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး တည်ဆောက်ချင်တယ် ဆိုရင် ကရင်နဲ့သာမက၊ ချင်းနဲ့သာမက ကချင်တွေနဲ့လည်း ညှိနှိုင်းရမယ်။ ဒါမှသာ တပြည်လုံး အတိုင်းအတာ ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အပစ်ရပ်မယ် ဆိုရင် တဖွဲ့တည်း၊ တဘက်တည်းက ရပ်လို့မရဘူး။ နှစ်ဘက်လုံးက ရပ်မှရမယ် ဆိုတာတွေကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းတို့ကို ကျနော်တို့ ပြောခဲ့ပါတယ်” ဟု ပဒိုကွယ်ထူးဝင်းက ရှင်းပြသည်။
အနာဂတ်တွင် ပြုလုပ်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းများတွင် KNU ကို မတရားအသင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားမှု ဖျက်သိမ်း ပေးရေး၊ KNU နှင့် ပတ်သက်မှုကြောင့် အကျဉ်းကျနေရသူများ အရေးတို့ကိုလည်း ထပ်မံ ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် KNU အဖွဲ့အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများ စတင်ခဲ့ပြီး ထိုစဉ်က အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ နော်စီဖိုးရာစိန်နှင့် အဖွဲ့တို့ ရန်ကုန်တွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်နိုင်သည်အထိ ဆက်ဆံရေး တိုးတက်ခဲ့သည်။ KNU ၏ ဆက်ဆံရေးရုံးခွဲကိုလည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ပဲခူးတိုင်း ကျောက်ကြီးမြို့၌ ပထမဆုံးအဖြစ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲဖြစ်နေလည်း ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်ဟုဆို
4 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website pps၁၂၃၄၅ January 7, 2013 - 8:13 pm	နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ဘူး ဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ကို သမ္မတကြီးက ဘာတွေပြောခဲ့လို့လဲ။
ဒီလိုလူမျိုးကို ခင်ဗျားတို့ ယုံတယ်ဆိုတော့ ဆေးများမိနေသလားကွာ။
ခင်ဗျားတို့ပါတီထောင်လို့ရပြီလား။ ဘာအာမခံချက်တွေရခဲ့ပြီလဲ။ စစ်သားတွေရေး ထားတဲ့ မြန့်မာ့ သမိုင်းကို ပြင်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးထားလို့လား
Reply	U Tin Win January 7, 2013 - 10:54 pm	KIA နဲ့ KIO ကိစ္စ မှာ.. ရှေ့ဆက့်မဲ့ ညှိနှိုင်းရေးကို ကြိုဆိုပါတယ်.. နှစ်သစ်ကူးး.. သတင်းကောင်းတခုလို့.. ၀မ်းမြောက် ပီတိဖြစ်မိပါတယ်… ရှက်ကြစေချင်ပါတယ်.. အားလုံးမြန်မာတွေပါ.. မတည့်ရင် ခဏပေါ့… လက်သည်းဆိပ်ရင်.. လက်ထိပ်နာကြမှာလေ…
Reply	zotung chin January 8, 2013 - 1:18 am	လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တိုင်း OK တယ်လို့ မထင်မိလိုက်ပနဲ့အုံး ။ မြွေဆိုတာ ရှာနဲ့သေချာ လျှက်မှ မြိုနေတာနော် KNU ရဲ့
Reply	Oak Soe January 8, 2013 - 2:26 am	A lot of lives and blood of Ethnic groups will not be in vain. Because of that there will not be trust and believe on Myanamr government anymore. So, Karen leaders has just sympathy on their own people and then they chosen this way for only peace but not to trust Myanmar government.
UWSA နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်
နမ္မတူတွင် လက်သည်မပေါ်သည့် ဒေသခံ အလောင်း ၃ လောင်းတွေ့
ဖားကန့် ဒေသခံ ၂ ဦးကို KIA နှင့် ဆက်နွယ်မှုဖြင့် တပ်မတော် ဖမ်းဆီးဟုဆို
၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံတွင် အားလုံးပါဝင်ရေးမူ UPDJC အတည်ပြု
အပစ်ရပ် ၈ ဖွဲ့ စိုးရိမ်မှု ၂၁ ရာစု ပင်လုံ မတိုင်ခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ညှိနှိုင်းလို